Vaovao - Ahoana no hitantanana tsara ny indostrian'ny fanodinana CNC
Indostrian'ny fanodinana CNC aorian'ny taona 2019, mihamaro ny orinasa mahatsapa ny fihenan'ny baikon'ny tsena. Ny fomba fitantanana ny indostrian'ny fanodinana CNC dia nanjary lohahevitra iray nampanahy an'ireo mpandraharaha maro. Ny teknolojia milina Wally dia niasa tao amin'ny indostrian'ny fanodinana CNC nandritra ny taona maro, ary miatrika olana toy izany koa. Inona no hataontsika?
Amin'ny ankapobeny, ny indostrian'ny fanodinana CNC dia an'ny indostria mpamokatra fototra. Eo imason'ny olona ratsy toetra dia mety ho ny orinasa mpamokatra ambaratonga ambany indrindra io. Eo imason'ireo optimista dia indostria fanamboarana fototra tena tsara izy io. Tsy misy fetran'ny fiainana eny an-tsena ny vokatra, ary tsy misy mahasamihafa ny vanim-potoana sy ny vanim-potoana tampon'ny.
Mba hivelomana tsara kokoa amin'ny indostrian'ny fanodinana CNC, ny tena zava-dehibe dia ny kalitao. Ny kalitao dia tokony ho ny làlan'ny fampandrosoana ny orinasa. Betsaka ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny fitaovana no sarotra ny mamorona mpamatsy fikirakirana CNC kalitao avo lenta. Ny antony lehibe dia tsy mifanaraka amin'ny fenitra ny kalitaon'ny vokatra izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fivorian'ny mpanjifa. Amin'ny lafiny iray, mirotsaka amin'ny fikirakirana CNC Amin'ny lafiny iray hafa dia ireo mpanjifa izay tsy mahita processeur cnc ambony kalitao.
Ny fomba fanaovana asa tsara amin'ny kalitaon'ny vokatra, voalohany indrindra, tsy maintsy mitandrina ny fenitra ary mampihatra tsara ireo fenitra napetraka. Mandritra ny fizotry ny fampiharana dia tsy tokony hisy fihenam-bidy, toy ny fenitry ny sary, fenitry ny fandidiana, fenitra fanaraha-maso, sns. Ny rohy rehetra amin'ny vokatra avy amin'ny akora ka hatramin'ny fandefasana dia fehezina tanteraka ary ampiharina mifanaraka amin'ny fenitra, mba hananana toetra tsara tontolon'ny kolontsaina orinasa, ny kalitao dia ho tsara kokoa ary tsara kokoa Tsy maintsy misy ny tsena.
Ao amin'ny drafi-pandraharahana amin'ny taona 2019, ny teknolojia milina volley dia mikasa ny hampiditra fitaovana fikirakirana fitotoana japoney avo lenta indray, manitatra tokoa ny fahafaha-mamokatra ary manompo mpanjifa vaovao sy taloha kokoa.